2 Tantara 34 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
2 Tantara 34:1-33
34 Valo+ taona i Josia+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary iraika amby telopolo taona no nanjakany tany Jerosalema.+ 2 Ary nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah izy,+ sady nanao hoatran’izay nataon’i Davida razambeny.+ Nanaraka an-tsakany sy an-davany ny didin’Andriamanitra izy.+ 3 Tamin’ny taona fahavalo nanjakany, raha mbola zaza+ izy, dia nanomboka nitady+ an’ilay Andriamanitr’i Davida razambeny. Ary tamin’ny taona faharoa ambin’ny folo, dia natombony ny fanadiovana+ an’i Joda sy Jerosalema, ka nesoriny ny toerana avo+ sy ny tsato-kazo masina+ sy ny sary sokitra+ ary ny sarivongana metaly. 4 Ary narodana teo anatrehany ny alitaran’ireo+ Bala.+ Dia nopotehiny ny fandoroana emboka manitra+ izay teny ambony, ary nopotipotehiny ho vovoka+ ny tsato-kazo masina+ sy ny sary sokitra+ ary ireo sarivongana metaly, ka nafafiny teny ambonin’ny fasan’ireo nanao sorona ho an’ireny.+ 5 Ary ny taolan’ny+ mpisorona dia nodorany teo ambonin’ny alitaran’izy ireo.+ Koa nodiovin’i Josia i Joda sy Jerosalema. 6 Ary tany amin’ireo tanànan’i Manase+ sy Efraima+ sy Simeona ka hatrany amin’ireo tanànan’i Naftaly sy tany amin’ny toerana rava rehetra, 7 dia narodany ny alitara+ sy ny tsato-kazo masina.+ Notorotoroiny ho vovoka+ koa ny sary sokitra,+ ary nopotehiny avokoa ny fandoroana emboka manitra+ nanerana ny tanin’ny Israely. Dia niverina tany Jerosalema izy avy eo. 8 Ary tamin’ny taona fahavalo ambin’ny folo+ nanjakan’i Josia, rehefa voadiony ny tany sy ny trano, dia nirahiny hanamboatra izay simba+ tamin’ny tranon’i Jehovah Andriamaniny i Safana+ zanak’i Azalia, sy Mahaseia lehiben’ny tanàna, ary Joa mpanoratra ny raharaham-panjakana, ilay zanak’i Joahaza. 9 Koa nankany amin’i Hilkia+ mpisoronabe izy ireo, ka nanome ny vola nentina tao an-tranon’Andriamanitra, dia ny vola voangon’ny Levita mpiandry varavarana+ avy tamin’ny fokon’i Manase+ sy Efraima+ sy ny sisa rehetra tamin’ny Israely+ sy ny Joda rehetra sy ny Benjamina ary ny mponin’i Jerosalema. 10 Ary ny vola dia natolotr’izy ireo teo an-tanan’ny mpanao ny asa izay voatendry hiandraikitra ny tao an-tranon’i Jehovah.+ Koa nampiasain’ireo mpiasa niasa tao an-tranon’i Jehovah ilay vola, mba hanatsarana ilay trano sy hanamboarana ny simba. 11 Dia nomena ny mpanao asa tanana sy ny mpanao trano+ ilay vola, mba hividianana vato voapaika+ sy hazo latsim-baravarana, ary hazo lehibe hanorenana ireo trano navelan’ny mpanjakan’ny+ Joda ho rava. 12 Koa nataon’ireo lehilahy ireo ilay asa, ary mendri-pitokisana+ izy ireo tamin’izany. Ary voatendry ho mpiandraikitra azy ireo i Jahata sy Obadia Levita avy tamin’ny taranak’i Merary,+ ary i Zakaria sy Mesolama avy tamin’ny taranaky ny Kehatita.+ Ary ny Levita izay samy tena nahay nitendry zavamaneno,+ 13 no niandraikitra+ an’ireo mpitondra entana+ sy ny mpiasa rehetra nanao asa samy hafa. Ary nisy mpitan-tsoratra+ sy mpiadidy ary mpiandry vavahady+ koa tamin’ireo Levita.+ 14 Rehefa namoaka ny vola+ nentina tao an-tranon’i Jehovah izy ireo, dia hitan’i Hilkia+ mpisorona ny boky+ misy ny lalàn’i Jehovah+ izay nomena tamin’ny alalan’i Mosesy.+ 15 Koa hoy i Hilkia tamin’i Safana+ mpitan-tsoratra: “Hitako tao an-tranon’i Jehovah ny boky misy ny lalàna.” Dia nomeny an’i Safana ilay boky. 16 Ary nitondra ilay boky tany amin’ny mpanjaka i Safana, ka niteny taminy hoe: “Manao izay rehetra nampanaovina azy ny mpanomponao. 17 Mandraraka ny vola azo tao an-tranon’i Jehovah izy ireo, ka manolotra izany ho eo an-tanan’ireo lehilahy voatendry sy ny mpanao ny asa.”+ 18 Hoy koa i Safana mpitan-tsoratra tamin’ny mpanjaka: “Misy boky+ nomen’i Hilkia mpisorona ahy.”+ Dia novakin’i Safana teo anatrehan’ny mpanjaka izany.+ 19 Raha vao nandre izay voalazan’ny lalàna ny mpanjaka, dia nandrovitra ny akanjony avy hatrany.+ 20 Dia nodidian’ny mpanjaka i Hilkia,+ sy Ahikama+ zanak’i Safana, sy Abdona zanak’i Mika, sy Safana+ mpitan-tsoratra,+ ary Asaia+ mpanompon’ny mpanjaka, nanao hoe: 21 “Mandehana manontany+ an’i Jehovah, ho ahy+ sy ho an’izay sisa tavela any amin’ny tanin’ny Israely sy Joda, momba ireo teny ao amin’io boky+ vao hita io. Fa lehibe ny fahatezeran’i Jehovah+ hihatra amintsika, satria tsy nitandrina ny tenin’i Jehovah ny razantsika ka tsy nanaraka izay rehetra voasoratra ao amin’io boky io.”+ 22 Koa lasa i Hilkia sy ireo nirahin’ny mpanjaka, ka nankany amin’i Holda+ mpaminanivavy,+ vadin’i Saloma mpikarakara ny fitafiana,+ zanak’i Tikva zanak’i Harasa. Nipetraka tao amin’ny tanàna vaovao tao Jerosalema ravehivavy. Ary nolazain’izy ireo taminy izay nitranga. 23 Dia hoy i Holda: “Izao no nolazain’i Jehovah Andriamanitry ny Israely: ‘Lazao amin’ilay lehilahy naniraka anareo ho atỳ amiko, hoe: 24 “Izao no nolazain’i Jehovah: ‘Hahatonga loza+ amin’ity toerana ity sy ny mponina eo aminy aho,+ eny, hataoko tonga aminy ny ozona+ rehetra voasoratra ao amin’ilay boky novakina teo anatrehan’ny mpanjakan’ny Joda.+ 25 Nahafoy ahy mantsy izy ireo+ ka nanolotra setroka ho sorona ho an’andriamani-kafa,+ mba hampahatezitra+ ahy amin’izay rehetra nataon’ny tanany,+ sy mba hahatonga ny fahatezerako hirehitra+ amin’ity toerana ity, ary tsy hovonoina izany fahatezerako mirehitra izany.’”+ 26 Izao koa lazaina amin’ny mpanjakan’ny Joda, izay naniraka anareo hanontany an’i Jehovah: “Izao no nolazain’i Jehovah Andriamanitry ny Israely+ momba ireo teny+ izay renao: 27 ‘Koa satria mora nanaiky ny fonao+ ka nanetry tena+ ianao noho ny amin’Andriamanitra, rehefa nandre ny teniny momba ity toerana ity sy ny mponina eo aminy, eny, nanetry tena teo anatrehako ianao+ ka nandrovitra+ ny akanjonao ary nitomany teo anatrehako, dia nihaino+ anao aho, hoy i Jehovah. 28 Koa hangoniko any amin’ny razanao ianao, ary amin’ny fotoana mampandry feizay ny tany no hahafatesanao,+ ka tsy ho hitan’ny masonao ny loza+ rehetra hamelezako ity toerana ity sy ny mponina eo aminy.’”’”+ Dia nentin’izy ireo tany amin’ny mpanjaka izany valin-teny izany. 29 Koa naniraka olona hamory ny anti-panahy rehetran’ny Joda sy Jerosalema ny mpanjaka.+ 30 Dia niakatra nankao an-tranon’i Jehovah+ ny mpanjaka, sy ny mponina rehetran’i Joda sy Jerosalema, sy ny mpisorona,+ sy ny Levita, ary ny olona rehetra, na kely na lehibe. Novakin’ny+ mpanjaka tamin’izy ireo ny teny rehetra tao amin’ilay bokin’ny fifanekena, izay hita tao an-tranon’i Jehovah.+ 31 Dia nijoro teo amin’izay nisy azy+ ny mpanjaka ka nanao fifanekena+ teo anatrehan’i Jehovah, fa hanaraka an’i Jehovah sy hitandrina ny didiny+ sy ny fampahatsiahivany+ ary ny fitsipiny+ amin’ny fony manontolo+ sy ny tenany manontolo,+ ary hanatanteraka+ izay voalazan’ilay fifanekena voasoratra tao amin’ilay boky.+ 32 Nasainy niditra tamin’ilay fifanekena koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy Benjamina. Ary ny mponin’i Jerosalema dia nanao araka izay voalazan’ny fifanekena nataon’Andriamanitra, dia ilay Andriamanitry ny razany.+ 33 Taorian’izany dia nesorin’i Josia avokoa ny zava-maharikoriko+ tany amin’ny tany rehetran’ny zanak’Israely,+ ary nasainy nanompo an’i Jehovah Andriamaniny ny olona rehetra tany Israely. Nanaraka an’i Jehovah Andriamanitry ny razany+ foana izy ireo, nandritra ny androm-piainan’i Josia.